Ndezvipi smart zvishandiso zvekumba?
Iwe unogona kunge wakamboona izwi richitenderera pane kushambadza kana kufarirwa kwetekinoroji yekuvandudza. Izvi zvigadzirwa zvine zvakashongedzwa maficha kwavanokubatsira iwe pamabasa ezuva nezuva, akadai sekubatidza / kudzima mwenje uye nekukupa iyo latest news uye ruzivo chete kushandisa izwi rako kana remote control. Ichi chinhu chakanakira vanhu vane kuremara kana vanhu avo anoshandisa mawiricheya nekuti ivo vanogona kugamuchira iyo ruzivo chaipo paminwe yavo matipi vasina kuve nekudiwa kwazviri maneja ivo pachavo kune kwavanoenda.
Midziyo yemumba smart inouya mumhando dzakasiyana uye saizi ine basa rakasiyana. Iyo imba sisitimu yave ichive ichive ichive chinhu chinozivikanwa chinowanikwa kuva nacho. Zvimwe zvezvinhu zvakakurumbira ndiAmazon Echo uye Alexa, Goolge Imba, uye Apple Homepod, iyo yakavaka mumatauri uye izwi rairo chinhu. Nezwi rairo chinhu, unogona kukumbira gadget kuti ikuudze iyo nhau, ridza mimhanzi, dzora zvishandiso zvemumba zvakangwara, tumira uye gamuchira mameseji, smart alarm wachi, uye kunyange kufonera shamwari dzako uye mhuri. Midziyo yega yega ine yavo ficha asi ivo vese zvinopa zvakakosha mipiro yekuita upenyu zviri nyore kune vanhu vanoshandisa kufamba zvinobatsira kana kuremara.
Amazon Echo Dot uye Echo
Mune zvimwe zviitiko, zvishandiso zvekumba zvine hungwaru hazvifanirwe kunge zvichishamisa uye zvine zvakawanda maficha kugara mune yakapfava mararamiro. Iwe unogona kuve nenzvimbo imwe yeimba kuti uve neakakosha zvinhu. Zvigadzirwa zviri anowanzobatanidzwa kufoni yako kuti uiraire kubva pafoni yako uye kuti ugamuchire zviziviso. Pazasi pane zvimwe zvigadzirwa zvaunogona kuisa kuti mamiriro ako ehupenyu ave nyore.
Sky Bell HD Wi-Fi Vhidhiyo Pamusuwo
Bhero remazuva ano rine rakavakirwa muvhidhiyo kamera iyo inobvumidza iwe kuti uone ari pamberi pemusuwo wako usingasimuke kuenda kumusuwo.
Lutron Wireless Dimmer Mwenje
Chengetedza kupenya kwechiedza ne kushandisa chidhiraivho chiri kure. Iwe unogona zvakare kudzima mwenje ne kushandisa kure.
Iyo smart thermostat iyo inokutendera iwe kudzora uye nekugadzirisa tembiricha yeimba yako nefoni yako smart kana webhu. Iyo yakavakirwa muAki mutauri iyo inokutendera iwe kushandisa izwi rako kuraira iyo thermostat.
Saka zvinobatsira sei chaizvo vanhu vakaremara uye vanhu vane mawiricheya?
Kufamba famba uchitenderera imba kunogona kuomera vanhu, kunyanya kana uri kushandisa a wiricheya. Kana iwe uchida kudzima mwenje, iwe unofanirwa kudaro kuzvifambisa kumwenje switch kuti uidzime. Mazuva ano, kana ukatenga smart home system kana kuisa switch switch system, unogona kudzima mwenje ne kushandisa foni yako kana remote control. Izvi zvinoponesa nguva nesimba. Mune zvimwe zviitiko, kuchengetedzeka kuri zvakakosha kuvakuru vanoda kurarama vakazvimirira. Kune aramu uye zvidziviriro zvekuchengetedza kwaunogona kuisa kune imba iyo inokutendera iwe kuti utarise kuti ndiani ari pamusuwo wako wepamberi, kutaura, uye kunyange kukuzivisa iwe kuburikidza nemudziyo wako wekufambisa kana paine vistor.
Neimwe nzira, zvishandiso zvemumba zvine hungwaru zvinogona kudaidzwa senge tekinoroji yekubatsira. Kuremara kwakasiyana kunoitika mhando dzakasiyana matambudziko. Munhu asingaone zvakanaka anoda kutsvaga nhamba yefoni ndiye hazviiti. Nekune rimwe divi vanhu vane nyaya dzekufamba vanoda kuita mabasa emazuva ese, sekupuruzira chinja chemwenje kana kuvhara mapofu avo kuti vasavanzike, zvinogona kuve zvakaoma. Smart kumba zvishandiso zvinoshandura iyo hazviiti kumabasa anogona.